Investo Nepal | २ महीनाको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन : अधिकांश परिसूचक निराशाजनक
२ महीनाको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन : अधिकांश परिसूचक निराशाजनक
चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो महीनाको अन्त्यमा अधिकांश समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू निराशाजनक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतवार सार्वजनिक गरेको २ महीनाको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनले मुख्य गरी मूल्य वृद्धिमा दबाब परेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह बढ्न नसकेको र व्यापारघाटा अझ गहिरिएको सङ्केत गरेको छ ।
मूल्य वृद्धिमा दबाब पर्दा आममानिसको दैनिकीमा असर पर्नेे र आन्तरिक स्थायित्व कायम गर्न कठिनाइ हुन्छ । त्यसैगरी शोधनान्तर घाटा बढ्दा बाह्य स्थायित्व कमजोर हुने अर्थशास्त्रीहरूको मान्यता छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको विप्रेषण अपेक्षित रूपमा नबढ्दा सेवा खाता घाटा बढेको छ भने आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापारघाटा गहिरिएको हो । यी सबै परिसूचकले समग्र अर्थतन्त्र जोखीम उन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।
चालू आवको दोस्रो महीनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । गत आवको सोही अवधिमा ७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको त्यस्तो मुद्रास्फीति चालू आवको साउनसम्म २ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बाढी तथा डुबानका कारण आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आएको र खाद्य तथा तरकारी बालीमा क्षति पुगेकाले मुद्रास्फीति दबाबमा परेको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा दलहन, गेडागुडी र मसलाको मूल्य नियन्त्रणमा रहेको भए पनि तरकारीको मूल्य ८ दशमलव ९ प्रतिशत र मदिराजन्य पेयपदार्थको मूल्य ८ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत आवको दोस्रो महीनामा रू. ३ अर्ब ५० करोडले घाटामा रहेको समग्र शोधनान्तर चालू आवको सोही अवधिमा रू. २ अर्बभन्दा धेरैले बढेर ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसबाहेक यस अवधिको विप्रेषण पनि शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो विप्रेषण ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको थियो । यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटा पनि अघिल्लो आवको भन्दा १२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका उल्लिखित सबै चुनौतीबारे राष्ट्र बैङ्कको समष्टिगत प्रतिवेदन मौन छ । उल्लिखित जोखीमलाई विश्लेषकले अर्थतन्त्रका चुनौतीका रूपमा अथ्र्याएका छन् । अर्थशास्त्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले आर्थिक परिसूचक असहज अवस्थामा रहँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती देखा पर्ने बताए । ‘सरकारले सबै चुनौतीको समाधान दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चासो देखाएका छन्। (Jul-26)